Mirjana nke Medjugorje: Nwanyị anyị hapụrụ anyị nnwere onwe ịhọrọ | EKPERE NA OZI
Mirjana nke Medjugorje: Nwanyị nwanyị anyị hapụrụ anyị ịhọrọ
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 20, 2020 Ọgọstụ 20, 2020
FATHER LIVIO: Enwere m nnukwu mkpasi ike banyere mkpa ọrụ anyị dị na ozi nke Queen nke Peace. N'otu oge, Nwaanyị anyị kwuru, sị: "Inwere ike ịhọrọ, yabụ jiri ya mee ihe".
MIRJANA: Ọ bụ eziokwu. Agwara m ndị njem ahụ: “Agwawo m unu ihe niile Chineke chọrọ n’aka anyị site n’aka Nwanyị anyị ma ị nwere ike ịsị: Ekwere m ma ọ bụ ekweghị na akụkọ nke Medjugorje. Ma mgbe ị n’iru n’ihu Onye-nwe ị gaghị enwe ike ịsị: Amaghị m, n’ihi na ị maara ihe nile. Ugbu a ọ dabere na uche gị, maka ị nweere onwe gị ịhọrọ. Ma nara ma me ihe Chineke choro n’aka gi, ma obu mechie onwe gi ma ju ime ya.
FATHER LIVIO: Nnwere onwe ime nhọrọ bụ onyinye buru ibu ma dị egwu n'otu oge.
MIRJANA: Ọ ga-adị mfe ma ọ bụrụ na mmadụ amanye anyị mgbe niile.
FATHER LIVIO: Ma, Chineke adaghị mbà, ọ na-emekwa ihe niile iji zọpụta anyị.
MIRJANA: Nne ya zitere anyị ihe karịrị afọ iri abụọ, maka na anyị na-eme ihe ọ chọrọ. Mana n'ikpeazụ ọ dabere na anyị oge niile ịnabata ọkpụkpọ òkù ahụ ma ọ bụ ịnabata.
FATHER LIVIO: Ee, ọ bụ eziokwu ma ana m ekele gị na ị banyela n’okwu dị m n’anya. Akara Madonna a bu ihe puru iche na akuko nke Nzuko. Ọ dịtụbeghị mere na ọgbọ dum nwere dịka nne ya na onye nkuzi Madonna n'onwe ya na ọnụnọ pụrụ iche nke ndị a. Gi onwe gi aghaghariri uche n’ezie banyere ihe omume a nke bụ otu n’ime ihe kachasị dị egwu ma dị mkpa n’ime puku afọ abụọ nke akụkọ ntolite nke Kristian.
MIRJANA: Ee, ọ bụ nke izizi a na-anụ akụkọ dị ka ndị a. Ewezuga ọnọdụ m dị iche na nke gị. Ama m ihe kpatara ya, na agaghị m eche ọtụtụ ihe.
FATHER LIVIO: Ọrụ gị bụ izipu ozi ahụ, na-agwaghị ya na echiche gị banyere ya.
MIRJANA: Ee, ama m ihe kpatara ọtụtụ afọ.
FATHER LIVIO: So mara ihe kpatara ya?
MIRJANA: Ihe kpatara ị ga - ahụ ya mgbe oge ahụ ruru.
FATHER LIVIO: Aghọtara m. Mana ugbua, tupu ị banye n'okwu ahụ, nke doro anya na ọ dị nso n'obi onye ọ bụla na nke metụtara ọdịnihu, ị nwere ike ikpokọta ozi bụ isi na-esite na Medjugorje?
MIRJANA: Enwere m ike ikwu ya n'echiche m.
FATHER LIVIO: N’ezie, dika echiche gi si di.
MIRJANA: Dị ka m si chee, udo, ezi udo, bụ nke dị n’ime anyị. Ọ bụ udo ahụ ka m na-akpọ Jizọs, ọ bụrụ na anyị nwere ezi udo, yabụ Jizọs nọ n'ime anyị, anyị nwekwara ihe niile. Ọ bụrụ na anyị enweghị ezi udo, nke bụ Jizọs bụ maka m, anyị enweghị ihe ọ bụla. Nke a bụ ihe dị m ezigbo mkpa.
FATHER LIVIO: Udo nke Chukwu kacha mma.
MIRJANA: Jisos bu udo dirim. Naanị ezigbo udo bụ ihe ịnwe mgbe ị nwere Jizọs n’ime gị. Mu onwem, Jisos bu udo. Ọ na-enye m ihe niile.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nrapu nke nne nye ndi Guardian nke umu ya
Next Post → Post ozo:O rubere nye onyinye nke ọrụ ebube: chaplet nke graces